Sing Swim Sway.....: 09/2008
*3. มะเร็งรังไข่ อาการ ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมออนหรือการมีอาการเจ็บปวดหลังการมีเพศสัมพันธ์ > มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้อาการท้องอืดอาหารไม่ย่อย น้ำหนักลดและมีอาการปว ดหลัง
5. มะเร็งปอด อาการ มักมีอาการไอบ่อย ๆ มีเลือดออกและมีเสมหะปนมากับน้ำลายน้ำหนักลดอย่างฮวบฮาบ เจ็บหน้าอกและหายใจลำบากหรืออาจมีอาการหอบปนอยู่ด้วยทั้ง ๆ ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
*8. มะเร็งสมอง อาการ ปวดศีรษะนาน ๆ และมักมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอาเจียนหรือการผิดปกติของการมองเห็น ตาพร่า และเห็นแสงเขียว ๆ แดง ๆ ลอยไปมาเวลาปวดศีรษะ อ่อนเพลียไม่มีแรง หรือ การเป็นลมโดยกะทันหันอวัยวะบางส่วนของร่างกายหยุดทำงานเช่นมีอาการชาและเป็นอัมพาตชั่วคราวควรให้ความระวังเป็นพิเศษหากคุณเคยมีประวัติการปวดหัวที่มีอาการเหล่านี้ประกอบอยู่ด้วย
*13. มะเร็งลำไส้ อาการ น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วมีอาการปวดท้องอย่างมากและระบบการย่อยผิดปกติ มีเลือดออกปนมากับอุจจาระ
14. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง อาการมีก้อนบวมเกิดขึ้นที่ใต้รักแร้หรือใต้ขาหนีบโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ได้เกิดอาการติดเชื้อในบาง ส่วนของร่างกายมะเร็งผิวหนัง อาการมีแผลหรือแผลเปื่อยพุพองที่ไม่ได้รับการรักษาอยู่เป็นเวลานานตลอดจนไฝหรือหูดที่โตขึ้นและมีการเปลี่ยนสีหรือรูปร่าง ขนาด นอกจากนี้อาการอันตรายอีกอย่างหนึ่งที่ เรียกว่าเมลาโนมา ( Melanoma)ค ือเนื้อ งอกที่ประกอบด้วยเซลล์ที่มีเมลานินสะสมอยู่ เช่น กระจุดด่างหรือไฝถ้าคุณมีไฝมากกว่า 50 เม็ดทั่วร่างกายหรือมีคนในครอบครัวที่มีประวัติว่าเคยเป็นโรคนี้มาก่อนคุณจะมีอัตราเสี่ยงสูงกว่าคนอื่นๆ ส่วนอันนี้เค้าฟอเวิร์ดติดมาด้วย –
ถึงท่านผู้โชคดี ขอให้ท่านนำเรื่องนี้ไปบอกต่อเป็นวิทยาทาน ท่านจะโชคดีมีความสุขตลอดกาล ตำรานี้ใช้แก้โรคมะเร็งผู้เป็นมะเร็งจะหายโดยไม่คาดคิดสำหรับมะเร็งจะหายภายใน6วัน
วิธีรักษา - ไปที่ร้านยาจีน ซื้อหัวเตย 1 ตำลึง หัวขิง 1 ตำลึงก้อนเกลือ3ก้อน นำมารวมกันแล้วแช่น้ำทิ้งไว้ 1 วัน ในน้ำ 1 ชาม ให้ดื่มจนหมดชาม
Labels: สุขภาพ - อาหาร
7. สิ่งที่น่าสังเวชที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความถดถอยของตัวเอง
10. ทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ สุขภาพที่สมบูรณ์
12. ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การให้อภัยและความเมตตากรุณา
14. สิ่งที่ทำให้อิ่มอกอิ่มใจที่! สุดในชีวิตเรา ก็คือ การให้ทาน
Labels: ปรัชญา - ธรรมะ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကျင့်ပျက် လာဘ်စားမှု ပိုလာ
via Welcome to the Mizzima News - Burmese Version on 9/24/08
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထင်သာမြင်သာရှိမှုအဖွဲ့ (Transparency International - TI) ၏ နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်လိုက်သော စစ်တမ်းအရ မြန်မာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် အကျင့်ပျက် လာဘ်စားမှု ပိုမိုလာခဲ့သည်ဟု ဆို ...
ချင်းမိုင်။ ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထင်သာမြင်သာရှိမှုအဖွဲ့ (Transparency International - TI) ၏ နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်လိုက်သော စစ်တမ်းအရ မြန်မာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် အကျင့်ပျက် လာဘ်စားမှု ပိုမိုလာခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အစီရင်ခံစာအရ လေ့လာ စူးစမ်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သော နိုင်ငံပေါင်း ၁၈ဝ အနက် မြန်မာနိုင်ငံသည် လာဘ်စားမှု သဘောထား အမြင်အညွှန်း (Corruption Perceptions Index – CPI) ၌ အောက်ဆုံးအဆင့် ဆိုမာလီယာနိုင်ငံ ပြီးလျှင် ဒုတိယအဆိုးဆုံး နိုင်ငံအဖြစ် အီရတ်နိုင်ငံနှင့် အမှတ်တူ ရှိနေသည်ဟု ဆိုပါသည်။
သို့သော် ဤလေ့လာတွေ့ရှိချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် တခုလုံး ခြုံသည့်အဆင့်တခု မဟုတ်ဘဲ ပျှမ်းမျှအဆင့်မျှသာ ရှိနေပါသည်။ TI က အသုံးပြုသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ဇယားတွင် အဆင့်သုညမှ တဆယ်အထိရှိပြီး၊ အဆင့်သုညသည် လာဘ်စားမှု အဆိုးဝါးဆုံး အခြေအနေကို ပြသည်။
ဤသတ်မှတ်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဆင့်သည် ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်တွင် အဆင့် ၁.၉ ရှိရာမှ နောက်ဆုံး လေ့လာချက်တွင် အဆင့် ၁.၃ သို့ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ ဤအဆင့်သည် TI က စောင့်ကြည့် လေ့လာခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် လေ့လာမှုများ၌ အနိမ့်ဆုံးအဆင့် ဖြစ်သည်။
ရယ်စရာကောင်းသည်မှာ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အမှတ်တူ နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် ရှိခဲ့သည့် ဆိုမာလီယာထက် ယခုနှစ်တွင် အဆင့်တဆင့် တက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
TI ၏ အပြောအရ ဤအညွှန်းကိန်းသည် "ပြည်သူပိုင် ကဏ္ဍ၌ရှိသော အကျင့်ပျက် ခြစားမှုများကို ဗဟိုပြု လေ့လာခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုကို အဓိပ္ပါယ် သတ်မှတ်ရာတွင် "ကိုယ်ကျိုးစီးပွါးအတွက် ရာထူး အရှိန်အဝါကို အလွဲသုံးစား ပြုခြင်းဖြစ်သည်"။ တိုင်းပြည်၏ ရမှတ်ကို တွက်ချက်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်သူ အများအပြားနှင့် စီးပွါးရေး စစ်တမ်းများကို အခြေခံ တွက်ချက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယမန်နှစ်က တွေ့ရှိချက်များ အတိုင်းပင် ယခု တွေ့ရှိမှုများ အရလည်း CPI သည် "ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ အဖွဲ့အစည်းစနစ်များ ကျဆုံးခြင်းတို့နှင့် ဤလာဘ်စားမှု ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဆက်နွယ်နေသည်ကို မီးမောင်းထိုးပြလျက် ရှိသည်" ဟု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အဖွဲ့ကြီးက ပြောကြားထားပါသည်။
"ဝင်ငွေနည်း နိုင်ငံများတွင် ဖြစ်စေ၊ ဝင်ငွေများ နိုင်ငံများတွင် ဖြစ်စေ၊ အကျင့်ပျက် လာဘ်စားမှုကို ဖြေရှင်း ကိုင်တွယ်နိုင်ရန် အလုပ်ဖြစ် လည်ပတ်နေသော လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် အစိုးရဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းကြီးများ လိုအပ်သည်။ ပိုမိုဆင်းရဲ မွဲတေသော နိုင်ငံများအတွက်မူ အကျင့်ပျက် လာဘ်စားသော တရားစီရင်ရေးစနစ် လွှမ်းမိုးနေခြင်းကို မကြာခဏ တွေ့ရပြီး ထိရောက်မှုမရှိသည့် ပါလီမန်စနစ်ကိုလည်း မျက်စိလျှမ်းနေကြသည်" ဟု TI ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက် လာဘ်စားမှု လေ့လာစူးစမ်းမှုတွင် ဆက်လက် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
အခြေခံကျသော် ပြဿနာများ၏ ဗဟိုချက်မ၌ ရှိနေသော ပြည်သူပိုင် ကဏ္ဍ၌ စနစ်ကြီးတခုလုံး အနေဖြင့် အကျင့်ပျက် လာဘ်စားမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကို ကိုင်တွယ်ရန်အတွက် ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံကို ရည်ရွယ်ထားသည့် ဤအစီရင်ခံစာ ပြုစုတင်ပြသူများ၏ သတင်းစကားတွင် "အလှူရှင်နိုင်ငံများ အနေနှင့် မိမိတို့ ပေးအပ်လိုက်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အကူအညီများကို အကူအညီ လက်ခံသော နိုင်ငံများရှိ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများခိုင်မာအောင် လုပ်ရေးနှင့် ဤ အချက်ကို မျက်စိလျှမ်းမသွားစေရေးကို သေချာအောင် ဂရုပြုရန်လိုကြောင်း၊ သို့မှသာ ဤဖွံ့ဖြိုးမှု အကူအညီများ စီးဆင်းရာတွင် အလွဲသုံးစားမှုနှင့် အဂတိ လိုက်စားမှုများမှ ကာကွယ်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း" ပြောဆိုထားကြပါသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ ဤ TI ၏ အဂတိလိုက်စားမှုကို ကုစားရန် နည်းလမ်းများမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လတ်တလော နိုင်ငံရေး အကြပ်အတည်း၊ နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာတွင် ရှိနေသော အဆင့်အတန်း နှင့် နိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားသော ရှည်လျားလှသည့် ပိတ်ဆို့မှု စာရင်းရှည်ကြီးများကြောင့် လက်တွေ့တွင် ထိထိရောက်ရောက် အလုပ်ဖြစ်မဖြစ် ဆိုသည်မှာ မသေချာပါ။
ဒေသအလိုက် အခြေခံဖြင့်ကြည့်လျှင် တခုလုံးအနေဖြင့် အာရှပစိဖိတ် ဒေသသည် အခြေအနေ ဆိုးလှပြီး၊ ဒေသတွင်း ၃၂ နိုင်ငံအနက် ၂၂ နိုင်ငံတွင် သူသတ်မှတ်ထားသည့် အကျင့်ပျက် လာဘ်စားမ ရှိနေခြင်းကြောင့် ဤဒေသသည် "ပြည်သူပိုင်ကဏ္ဍတွင် ဆိုးဝါးသည့် အကျင့်ပျက် လာဘ်စားမှု ပြဿနာ" ရှိနေသည်ဟု ဆိုပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပျှမ်းမျှအမှတ် ၁.၃ ကြောင့် ဤဆင်းရဲမွဲတေသည့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံသည် အကြပ်အတည်းများ ပြည့်နှက်နေသည့် နိုင်ငံများဖြစ်သော ဆူဒန်၊ အာဖဂန်နစ္စတန် နှင့် ဟေတီနိုင်ငံ တို့နောက်တွင် ကပ်လျက် ရှိနေသည်။
၂ဝဝ၈ ခုနှစ်အတွက် အကျင့်ပျက် လာဘ်စားမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံများအဖြစ် စံတင် ဖေါ်ပြခံရသည့် နိုင်ငံများမှာ ဒိန်းမတ်၊ ဆွီဒင် နှင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံတို့ ဖြစ်ပြီး ထိုနိုင်ငံများသည် အမှတ် ၉.၃ ရရှိသည်။
TI သည် ယင်း၏ နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
စားသောက်ဆိုင်များတွင် တားမြစ်ဆိုးဆေးများ တွေ့ရှိ
via khitlunge ပြည်တွင်းသတင်း on 9/24/08 အစားအစာတွေကို ဆိုးဆေးနှင့် အရောင်တင်ရာတွင် သုံးစွဲခွင့်ပြုထားသည့် ဆိုးဆေး(Permitted"Food Color)နှင့်စားသောက်ကုန် ဆိုးဆေး(Food Grate Dyer) များမသုံးပဲ ဈေးသက်သာပြီး၊ လိုအပ်"သည့် အရောင်းလွယ်လွယ်နှင့်ရရှိနိုင်သည့် စက်မှုသုံး ဆိုးဆေးများကို အသုံးပြုလာကြခြင်းက စားသုံး"သူများ၏ ကျန်းမာရေးကိုစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာသည်။ နေ့စဉ်စား စားသောက်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်း သုံးစွဲ"ခွင့်မပြုသည့် ဆိုးဆေးများ အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိသဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်"သာယာရေးကော်မတီ ကျန်းမာရေးဌာနမှ ဆိုးဆေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ကျန်းမာရေး ဟောပြောပွဲများ
ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ကျန်းမာရေးဌာနမှ ဌာနမှူး ဒေါက်တာအောင်သန်းကပြောသည်။ သံဈေး၊ ညောင်ပင်"လေးဈေး၊ မော်တင်ဈေး၊ ကုန်ဈေးတန်းရှိ စားသောက်ကုန် အရောင်းဆိုင်တချို့ရှိ အရောင်တင်ငရုတ်"သီးမှုန့်၊ မျှင်ငါးပိ၊ငါးပိထောင်း၊ပုစွန်ချဉ်တို့တွင်သုံးရန်ခွင့်မပြုသည့် Rhodamine B ဆိုးဆေး၊ ပဲနီလေး၊"ငရုတ်ဆီ၊ အသားခြောက်၊ အသားကင်၊ လက်ဖက်ခြောက် အချိုခြောက်များတွင် Orange II ဆိုးဆေး"နှင့်လက်ဖက်အစိုတွင် Auramine O "ဆိုးဆေးများ အသုံးပြုထားကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိသဖြင့် ပညာ"ပေးဟောပြောပွဲများပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ခွင့်မပြုဆိုးဆေး Rhodamine B၊ Auramine O၊ Orange II"နှင့် Sudan ပါဝင်သော အစားအစာများတွင် စားသုံးမိပါကမျက်စိ၊ လည်ချောင်းနှင့် နှာခေါင်းတို့ယာယံ
ခြင်း၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်း၊ အသည်း၊ကျောက်ကပ်နှင့်အစာအိမ်လမ်းကြောင်းများကိုအဆိပ်ဖြစ်စေ"ပြီး တာရှည်သုံးပါက ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ကာ မျိုးရိုးဗီဇကိုလည်းအဆိပ်အတောက်(Genotoxic)ဖြစ်စေ"နိုင်သည်ဟု သိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဖေဖော်ဝါရီလက လည်းအသားကင်ဆိုင်များကိုစစ်ဆေးခဲ့ရာ Oran"-ge II ဆိုးဆေးအသုံးပြုခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သဖြင့်အသားကင်ဆိုင်များတွင်လည်းအသိပညာပေးမှုများ
ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ကျန်းမာရေးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားကြောင်း ၂၀၀၈ ခုနှစ် စက်တင်"ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ထုတ်7Day News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
Which Programs Should I Run To Scan A Computer For Malicious Software?
via gHacks technology news by Martin on 9/15/08
The amount of security applications for the end user has reachedapoint where the choice is adding to the insecurity and confusion of the user. So called experts all have their set of tools that they recommend for certain situations but it can happen that you getaset of totally different applications for the same task when asking two advanced users.
To give an example. Shouldauser run Ad-Aware, Spybot Search And Destroy, Spyware Terminator or one of the other dozen or so anti-spyware applications that can be used freely for personal non-commercial use.
To much choice can be confusing and this article tries to narrow down the list to security applications that are recommended most of the time. Some users will disagree with the choices and they have every right to do so. You can rest assured on the other hand that the selection of tools should be sufficient to scanacomputer system thoroughly
Spyware usually refers to malicious software that tries to spy on the user or serve advertisement to him. This can be done with tracking cookies, changing the user's homepage or showing popups from time to time.
Spybot Search And Destroy - Spybot Search and Destroy is updated regularly and does not confuse the user with different versions like Ad-Aware does with Ad-Aware Free, Plus and Pro.
Spyware Terminator - A tool that has been downloaded more than 17 million times should doagood job. Spyware Terminator is fast and efficient.
Anti-virus applications create probably the most controversy. There is so much choice of free and commercial applications that makes it nearly impossible to makeadecision. The applications protect the computer in realtime and can scan the computer thoroughly.
AVG Anti-Virus - A classic anti-virus software that provides protection against viruses, rootkits and spyware.
Free AV - Antivir protects the computer against viruses, rootkits, dialers and phising.
Rootkits have been gaining popularity in the last years and one could say that Sony did not haveasmall part in raising the public's perception of rootkits with their music CDs that containedarootkit in order to prevent customers from copying the music.
Rootkit Unhooker -aportable rootkit scanner withasize of under 100 Kilobyte.
Gmer - is another tool to scan the computer for rootkits.
ထိုင်း DTAC ဖုန်းတွင် မြန်မာသီချင်း နားထောင်နိုင်
Posted by The Irrawaddy Magazine | Thursday, September 18, 2008 | သတင်း |0comments »
အေးလဲ့ | စက်တင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၈
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ DTAC ဖုန်း ကုမ္ပဏီ၏ Ring 4U ဟုခေါ်သော မြန်မာသီချင်း နားထောင်နိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှု အစီအစဉ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအကြား ရေပန်းစား နေကြောင်း သိရသည်။
DTAC ကုမ္ပဏီ ၏ Ring 4U ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက မြန်မာသီချင်းနား ထောင်လိုသူများ အတွက် မြန်မာသီချင်း ပုဒ်ရေ ၄၅ ပုဒ် ခန့်ရှိပြီး သီချင်းတောင်းနိုင်ကြောင်း ဧရာဝတီ ကိုပြောသည်။
၎င်းဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု လိုပါက *7001 ကိုနှိပ်ပြီး မြန်မာဘာသာဖြင့် ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ သီချင်း ရွေးချယ်နိုင်ရန်အတွက် လမ်းညွန်ပေးမည်ဖြစ်သည်ဟုလည်း သိရသည်။။
အဆိုပါ နံပါတ်ကို နှိပ်စဉ်“သာယာနာ ပျော်ဖွယ်သီချင်း အစီအစဉ်မှ ကြိုဆိုပါတယ်၊ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ် ”ဟု ဝန်ဆောင်မှု ပေး၍ လမ်းညွန်ထားသည်။
၎င်းဝန်ဆောင်မှုမှာ သီချင်း တပုဒ် တကြိမ်အတွက် ထိုင်းဘတ် ၅ ဘတ် ပေးဆောင်ရပြီး တလအတွက် သီချင်း တောင်းမည် ဆိုပါ က ၃၁ ဘတ် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
“အခုလို ကိုယ့် မြန်မာသီချင်းကို ဖုန်းမှာ နားထောင်ရတော့ ပျော်ပါတယ်၊ ဒါကို ကျနော်တို့တွေ ဘန်ကောက် ၊ မဲဆောက်နဲ့ ချင်းမိုင်းမှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဆီက အချင်းချင်းရကြတယ်” ဟု ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားအများစု ဈေးရောင်းသည့် ညဈေး (Night Bazaar) တွင် အလုပ်လုပ်နေသော ကိုအောင်ထွန်းက ပြောသည်။
DTAC ဖုန်းကုမ္ပဏီသည် ထိုင်းနိုင်ငံဆက်သွယ်ရေး ၀န်ဆောင်မှုအတွက် ၁၉၈၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် စတင် ခဲ့ပြီး ယခုနှစ် မတ်လအထိ အသုံးပြုသူဦးရေ ၁၆ သန်း ရှိကြောင်း DATC ကုမ္ပဏီ အင်တာနက် စာမျက်နှာ တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း၌ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား သန်းနှင့်ချီ၍ နေထိုင်လုပ်ကိုင်လျှက် ရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 23 กันยายน 2551 15:53 น.
อึ้ง! สาวแขมร์ใช้สารหล่อลื่นสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ ทาหน้ารักษาสิว อย.ยันตรวจสอบแล้วไม่ใช่สารในถุงยาง เผยสารหล่อลื่นไม่มีตัวยารักษาสิว เตือนสาวๆ ไม่ควรนำมาใช้กับใบหน้าเด็ดขาด
นพ.นรังสันต์ พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า จากกรณีสาวกัมพูชานำสารหล่อลื่น "นัมเบอร์วัน พลัส" มาทาใบหน้าเพราะเชื่อมีประสิทธิภาพในการรักษาสิวนั้น อย.ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า "นัมเบอร์วัน พลัส" เป็นผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นช่วยในขณะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ มีวัตถุประสงค์การใช้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นหรือช่วยหล่อลื่นในขณะมีเพศสัมพันธ์ จึงไม่ใช่ถุงยางอนามัย และไม่ใช่สารหล่อลื่นที่อยู่ในถุงยางอนามัยแต่อย่างใด
"สำหรับผลิตในประเทศไทย มีการส่งออกไปจำหน่ายแก่องค์กรบริการประชากรนานาชาติ (พีเอสไอ) ประเทศกัมพูชา โดยสารหล่อลื่น "นัมเบอร์วัน พลัส" มีส่วนประกอบของสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารหล่อลื่นและให้ความชุ่มชื้น ซึ่งส่วนประกอบสำคัญ คือ สารที่ทำให้เกิดเนื้อเจลและวัตถุกันเสีย โดยไม่มีส่วนประกอบของสารที่มีคุณสมบัติใช้รักษาสิวตามที่เป็นข่าว ดังนั้น การนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้แต้มรักษาสิว จึงเป็นความเข้าใจผิดของผู้ใช้และเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ อย.ขอเตือนสาวๆ อย่านำสารหล่อลื่นดังกล่าวมาใช้ในการรักษาสิวบนใบหน้า เพราะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด อีกทั้งยังเป็นการไม่เหมาะสมอีกด้วย" นพ.นรังสันต์กล่าว
via Nano in Thailand Blog (นาโน เมืองไทย) by อาจารย์นอย on 9/22/08
เมื่อต้นเดือนกันยายน 2551 ที่ผ่านมา Intel ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไมโครชิพยักษ์ใหญ่ของโลก ได้ประกาศที่จะสยายปีกเข้ามาครอบครอง ตลาดการเก็บข้อมูลซึ่งเป็นของฮาร์ดดิสก์ ด้วยการเปิดตัว Solid State Drives (SSDs) หรือ Flash Memory ที่เราคุ้นเคยนั่นเอง ซึ่งเจ้า Thumb Drive ที่เรานิยมใช้กันอยู่นี้ได้มีความเร็วที่เพิ่มขึ้นเทียบเคียงฮาร์ดดิสก์แล้ว (และตอนนี้ก็มีความเร็วแซงหน้าฮาร์ดดิสก์ไปแล้ว) แถมมีความจุสูงขึ้นในราคาที่ถูกลงเรื่อยๆ เบื้องต้น Intel เขาจะทุ่มตลาด SSD ที่ขนาด 80 GB ก่อน จากนั้นก็จะมี 160GB กับ 250 GB ออกตามมา ซึ่งนักวิเคราะห์คาดหมายว่า SSD จะเข้ามาแทนที่ฮาร์ดดิสก์ในตลาดโน๊ตบุ๊คในอีกไม่ช้า (ในบ้านเราก็เริ่มมีความนิยมโน๊ตบุ๊คที่ไม่มีฮาร์ดดิสก์กันมากขึ้นอย่างชัดเจน เพราะทั้งเบาและประหยัดพลังงาน)
ข้อดีของ SSD ก็คือมันใช้หน่วยความจำที่เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การโหลดโปรแกรมและเก็บข้อมูลสามารถทำได้เร็วกว่าฮาร์ดดิสก์มากๆ ดังนั้นการที่เราจะเริ่มรันโปรแกรม เช่น ตอนเปิดเครื่องขึ้นมาใช้ มันจะทำได้เร็วมาก ในขณะที่ฮาร์ดดิสก์จะทำการโหลดข้อมูลเข้าหน่วยความจำทำได้ช้ากว่า เราจึงต้องรอตอนเปิดเครื่องเป็นเวลานานๆ กว่า Windows จะโหลดขึ้นมาและเริ่มทำงาน ฮาร์ดดิสก์จึงไม่เหมาะกับโน๊ตบุ๊ค ซึ่งต้องการความเร็วในการใช้งาน นอกจากนั้น SSD ยังทนร้อนทนหนาวได้ดีกว่าฮาร์ดดิสก์ด้วยครับ โดยทั่วไปฮาร์ดดิสก์จะชอบทำงานที่อุณหภูมิระหว่าง 5-55 องศาเซลเซียส แต่ SSD สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -40 ถึง 85 องศาเซลเซียส นักวิเคราะห์จึงฟันธงว่า ต่อไป SSD จะเข้าไปอยู่ในตลาดของความบันเทิงในรถยนต์แน่นอน รวมไปถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบ Outdoor ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล เครื่องเล่น MP3
น่าเป็นห่วงครับ เพราะอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ในบ้านเรามีมูลค่าถึง 200,000 ล้านบาท และถ้าจะเกิดอุตสาหกรรม SSD ขึ้นมาทดแทนฮาร์ดดิสก์ ประเทศที่จะเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เก็บข้อมูลแทนประเทศไทยจะกลายเป็น จีน มาเลเซีย เวียดนาม เพราะการผลิต SSD ไม่ต้องการผลิตชิ้นส่วนมากมาย เหมือนฮาร์ดดิสก์ การตั้งฐานผลิตทำได้ง่ายกว่ามากครับ
(ภาพบน: พริตตี้กำลังแสดงสินค้า SSD ที่นับวันจะเบียดฮาร์ดดิสก์ตกขอบเข้าไปทุกที)(ภาพล่าง: เมื่อปี ค.ศ. 2004 บริษัท Toshiba วางแผนนำสินค้าฮาร์ดดิสก์ขนาดจิ๋วที่มีความจุ 2GB ออกวางตลาดสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แต่แผนนี้ก็มีอันพังพาบไปเพราะ Thumb Drives นั่นเอง)
ประเทศไทยได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางกับประเทศต่างๆ จำนวน 50 ประเทศ ซึ่งผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางเข้าไปในดินแดนของประเทศภาคีได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) และจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่เป็นเวลาต่างๆ กันตามความตกลง
ประเทศที่อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ ออสเตรีย ตุรกี
เบลเยี่ยม ลักเซมเบอร์ก เปรู
นอร์เวย์ เยอรมัน อิสราเอล
สวิตเซอร์แลนด์ เช็ค เม็กซิโก
อาร์เจนตินา สวีเดน ฟินแลนด์
ฮังการี เนปาล โปแลนด์
เนเธอร์แลนด์ อิตาลี ลิกเตนสไตน์
โรมาเนีย บราซิล เดนมาร์ก
ชิลี สโลวัก แอฟริกาใต้
ประเทศที่อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
หนังสือเดินทางประเทศไทย เริ่มจากบนซ้ายตามเข็มนาฬิกา ประเภทธรรมดา ทางราชการ ทางการทูต และเดินทางชั่วคราว
ฮ่องกง จีน มองโกเลีย
ลาว มาเลเซีย พม่า
ประเทศที่อยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ บราซิล
ประเทศที่อยู่ได้ไม่เกิน 60 วัน
มาเลเซีย เขตปกครองพิเศษฮ่องกง แอฟริกาใต้
ประเทศที่อยู่ได้ไม่เกิน 21 วัน
Which Programs Should I Run To Scan A Computer For...
ကုန်တင်စက်လှေမီးလောင် သိန်းထောင်ချီ ဆုံးရှုံး
Fwd: [Cloud99] กล้วย..ธรรมดา แต่ไม่ธรรมดา (2)
ကော့သောင်းမှာ ဆန် (၁၀) ပြည်ထက် ပိုမရောင်းရ၊ ဗိုလ်ခ...
ကော့သောင်းတွင် စက်လှေမီးလောင် ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ကျေ...
ရခိုင်ပြည်နယ် ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျောက်တွင် ပင်လယ်ရေ...
သဘာဝဓါတ်ငွေ့ စစ်အစိုးရကို မျက်နှာသာပေး၊ အမျိုးသား ...